Soomaliland oo waxba kama jiraan kutilmantay warar laga baahiyay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Worldnews Soomaliland oo waxba kama jiraan kutilmantay warar laga baahiyay
Shalay Wargeyska Capitalethiopia ee kasoo baxa Magaalada Addis Ababa waxaa uu qorey in dowladda Itoobiya hakisay saamigii Dekedda Berbera, oo ahaa 19%, hayeeshee waxaa Warkaasi beenisey Soomaaliland.
Wasiirka Wasaradda Arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa sheegay in Warkaas uu qoray Wargeysa aan waxba ka jirin,isla markaana Itoobiya aysan hakin saamigii ay ku laheyd Dekedda Magaalada Berbera.
Waxaa uu sheegay Wasiirka in Warka uu qorey Wargeyska uu yahay mid ujeedo gaar ah laga leeyahay,isla markaana uusan jirin war rasmi ah oo kasoo baxay mas’uuliyiinta Dowladda Itoobiya lana xiriireen Madaxda dalkaas.
Isaga oo la hadlayay Tv-yada ka howlgalla deegaannada Soomaaliland ayuu Wasiirka sheegay in dhamaan heshiiskii ku saabsanaa horumarinta heshiiskii dekadda Berbera oo ay horay ula galeen Dowladda Itoobiya.
Dowlaha Itoobiya iyo Imaaraadka ayaa heshiis ku saabsan maalgashiga waxaa ay Soomaaliland kula galeen Soomaaliland,waxaana ay saamiyada ay u kala lahaayeen Imaaraadka 51%, Itoobiya 19%, halka Soomaaliland ku leedahay 31%.